Social and Economic Rights | International IDEA
လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ
Home / Publications / Primers / Social and Economic Rights
Dawood Ahmed, Elliot Bulmer
English, العربية, မြန်မာဘာသာ, español
လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများသည် လူတစ်ဦးချင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်မှု နှင့် ချမ်းမြေ့သုခများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထိုသို့ကာကွယ်ပေးရာတွင် နိုင်ငံတော်မှ ကမကထပြုသော ပညာရေး၊ အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ နေအိမ်အဆောက်အအုံ၊ သင့်တင်မျှတသောလုပ်အားခ၊ ကောင်းမွန်သည့်အလုပ်အကိုင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အခြားသော လူမှုရေးကောင်းကျိုးများကို ရရှိခံစားစေခြင်းဖြင့် အာမခံပေးသည်။
International IDEA မှ ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ခြင်း” စာတမ်းများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေး သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ရေးသားထုတ်ဝေသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ လွှတ်တော်ဥပဒေပြုသူများ၊ နိုင်ငံသားများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။
ဤစာတမ်းတစ်ခုချင်းစီသည် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်သော သာမန်စာဖတ်သူများအတွက် အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များအလိုက်မိတ်ဆက်စာအနေဖြင့်လည်း ရေးသားထားသည်။ ထို့အတူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးနယ်ပယ်၌ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့ ပြန်လည်နှီးနှော ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်သူများ၏ လက်တွေ့ကျကျ ကြုံတွေ့ရသော ရွေးချယ်မှုများအပေါ်တွင် အကြောင်းအရာအလိုက် စနစ်တကျခွဲခြားတင်ပြခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသော အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လွယ်ကူရှင်းလင်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် ရှင်းပြနိုင်ရန် ရှေးရှုသည်။
၂။ ပြဿနာက မည်သည့်အရာနည်း။
၃။ လူမှုစီးပွား အခွင့်အရေးတွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ။
၄။ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
၅။ လူမှုစီးပွား အခွင့်အရေးများအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းအပေါ် ဆန့်ကျင်ငြင်းဆိုခြင်းများ
၆။ ရွေးချယ်စရာ ဒီဇိုင်းများ
၇။ ဖြည့်စွက် စဉ်းစားနိုင်သော ရွေးချယ်စရာပုံစံများ
၈။ ဖြည့်စွက်စဉ်းစားရမည့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ
၁၀။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် မေးခွန်းများ
Removal of Presidents
Opposition and Legislative Minorities: Constitutional Roles, Rights and Recognition
What isaConstitution? Principles and Concepts
Event on ‘Assessing Ingneous Peoples’ Rights in Constitutions’ hosted at the 14th session of UN Expert Mechanisms on the rights of Indigenious People. Image credit: International IDEA.
A Coherence Programme mentor talking to female Executive Members of Aurahi Rural Municipality, Province 2. Credits of the image: International IDEA.
Under the shadows of COVID-19,apotential African spring of alternation of power